Fanomezana Krismasy: tranga mini iPad Retina | Vaovao IPhone
Manohy ny cFanentanana amin'ny Krismasy manome hevitra mba hahafantaranao izay homena ny olon-tianao na olona ao amin'ny fianakavianao izay manana iPad, fanomezana tsy lafo ary fanomezana somary lafo kokoa satria hatramin'ny tontolon'ny Apple dia misy ny vidiny ho an'ny tsiro rehetra. Famerenana ireo fanomezana mety ho hitantsika eo, kojakoja, kojakoja, gadget ... Amin'ity tranga ity dia fonosana.
Omaly izahay dia nitondra tranga taminao ho an'ny iPad Air vaovaoanio no anaovantsika izany ho an'ny iPad mini Retina. Fitaovana misy fisintomana be dia be noho ny refy kely misy azy izay mahatonga azy io ho fitaovana tonga lafatra hitondrana toerana iray amin'ny toerana iray hafa. Y mba hiarovana azy dia manana zavatra maro azo atao isika, andao jerena izy ireo ...
1 Apple SmartCase sy SmartCover
2 Tranga Belkin Air Protect
3 Cover fonosana Logitech Ultrathin
4 Belkin Lego Builder ho an'ny iPad mini Retina
6 iGuy ho an'ny iPad mini Retina, nataon'i Speck
Apple SmartCase sy SmartCover
Ny kilasika sasany amin'ity fonony ity ho an'ny fitaovana dia ny noforonin'i Apple mihitsyMila milaza aho fa izy ireo no tiako indrindra amin'ny famolavolana sy kalitaon'ny fitaovana. Ny SmartCase dia handrakotra ny fitaovana rehetra fa ny SmartCover kosa dia eo aloha ihany. Vita amin'ny fitaovana sy loko isan-karazany izy ireo vidin'ny € 79 amin'ny tranga SmartCase ary € 39 amin'ny tranga SmartCover.
Tranga Belkin Air Protect
Sarona izy io tena fototra fa mateza be. Raha hitanao ny toerana anaovan'izy ireo dokambarotra, Mampifantoka izany amin'ny besinimaro ho an'ny ankizy izy ireo satria manome fiarovana bebe kokoa ho an'ilay fitaovana izy io satria manarona azy na aiza na aiza ary toa tsy tokony hiharan'izany fahasimbana izany raha mianjera amin'ny tany izy, na na manipy azy aza isika ... Namboarin'i Belkin, iray amin'ireo marika manana traikefa indrindra amin'ity kojakoja ity. Ny zavatra tsara dia ny vidiny, ambany hatrany amin'ny $ 29Ny zavatra ratsy dia sarotra ny mahita azy any amin'ny magazay Espaniôla fa afaka mahita azy ianao tsy misy olana any amin'ny magazay amerikanina na amin'ny eBay.
Cover fonosana Logitech Ultrathin
Azo inoana koa fa ireo fonony izay mampiditra keyboard koa, Logitech dia iray amin'ireo mpanamboatra izay mahalala indrindra ny fomba fampidirana ny kitendry amin'ny tranga ary ity iray atolotray anao ity dia iray amin'izy ireo. Ity fonony ity, na ny marimarina kokoa, Ity fonony ity (satria miaro ny eo alohan'ny fitaovana misy antsika izy) dia ahafahantsika manana klavier hanamorana ny fanoratantsika sy hametahana ny iPad mini Retina misy vazivazy andriamby. izany dia hahatonga ny fitaovantsika handeha amin'ny fomba torimaso rehefa manarona anao izy io. Filokana azo antoka hahombiazana amin'ity Krismasy ity. Ny vidiny, 82,50 €.
Belkin Lego Builder ho an'ny iPad mini Retina
Miverina miaraka amin'ny filokana hafa avy any Belkin izahay, fotoana vitsy lasa izay nanatevin-daharana ny marika Lego malaza izy ireo mba hamorona tranga misy teboka mahazatra amin'ny marika kilalao, ary ankehitriny dia mamoaka ny kinova ho an'ny iPad mini Retina izy ireo. Sarona izay Hanarona ny fitaovantsika avy any aoriana sy ny ampahany amin'ny efijery izany, afaka manampy koa ireo singa Lego ao aoriana, ka ny vintana personalization be dia be izy ireo. Azonao ampiasaina izany 49,99 €.
Ilay saron-dàlana tsy lavitra eny an-dàlana; mahatohitra vovoka, lanezy, ary na dia ny rano aza, io no fonony tsara indrindra raha tianao ento miaraka aminao amin'ny fitsangatsangana an-tendrombohitra ny mini Retina anao na koa amin'ny dia an-tampon'ny havoana avo ... Mety tsara amin'ny vidiny rehetra atolotray antsika ity takelaka ity, 41,19 €. Ny Griffin dia manamboatra izay manana traikefa be dia be koa amin'ny tontolon'ny kojakoja ho an'ny iDevices.
iGuy ho an'ny iPad mini Retina, nataon'i Speck
Iray amin'ireo fonony tsara indrindra, dia natao ho an'ny kely indrindra amin'ny trano hankafizany ny iPad. Sarona izy io tena azo antoka satria manarona ny fitaovana amin'ny lafiny rehetra ary matevina mba hisorohana ny fahasimbana rehefa lavo ilay fitaovana. Ny 'sandrin'i' IGuy dia mamela ny zaza hitazona ny iPad hijerena ny sarimihetsika na sary tiany indrindra. Afaka mahazo izany ianao manodidina ny € 21.
Ary hatreto ity tolo-kevitry ny tranga ho an'ny iPad mini Retina ity, azo antoka fa tsy hahatratra ny sasany ianao nefa nomena ny tolotra misy dia nanandrana nifantina izay mahaliana sy manavao indrindra izahay. Tranga izay manampy zavatra bebe kokoa amin'ny iPad mini Retina anao.
Na dia efa niresaka momba ilay maodely tamin'ny fampisehoana Retina aza izahay, dia tsy maintsy lazaina izany ny maodely teo aloha koa dia mifanaraka amin'ny tranga rehetra hitantsika.
Fanazavana fanampiny - Fanomezana Krismasy: Trangam-piarakodia sy kitendry iPad Air
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fanomezana Krismasy: tranga mini iPad Retina